နားခိုရာ: November 2008
သားလေးရက်တစ်ရာပြည့်အဖြစ် မိသားစုတွေ စုပြီး စားကြ သောက်ကြတုန်းက ကျွန်တော့်အမေကို သူ့မြေးနဲ့ အမှတ်တရ ရိုက်ပေးထားတာ။ သားက အ၀တ်အစားအသစ်တွေနဲ့ ပဲနဲ့ပေါ့။ အမေကတော့ သူ့စတိုင်အတိုင်း အေးအေးချမ်းချမ်း ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ...
အမေငယ်ငယ်တုန်းက ဘွဲယူတုန်းက ပုံလေးကို လည်း တင်ထား လိုက်တယ်။
အမေတောင်အတော့ကို အိုသွားပါရောလား။ ကျွန်တော် သုံးလသား အရွယ် လောက်တုန်းက ချီပြီးရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေရှိသေးတယ်။ နောက်မှ အဲဒီပုံလေးတွေ တင်ဦးမယ် ...လောလောဆယ် scanner မရှိလို့။
Posted by little moon at 10:39 AM3comments:
Posted by little moon at 10:18 AM 8 comments:
Posted by little moon at 2:10 PM7comments:
ဒီမနက် mail စစ်တော့ Gmail မှာ Theme ဆိုတာလေး တိုးနေတာ သတိပြုမိလို့ ကြည့်မိတယ်။ Color နဲ့ Themeကို ရွေးစရာတွေ အများကြီး ပေးထားတယ်။ iGoogle မှာလိုပဲပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံမြို့ရဲ့ time zone နဲ့ လိုက်ပြီး ရာသီဥတု၊ နေထွက်ချိန် နေ၀င်ချိန် အလင်းအမှောင် အနုအရင့် အရောင်လေးတွေ ပြောင်းပေးတဲ့ theme တွေလဲရှိတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဆော့စရာတစ်ခုတိုးတာပေါ့။ :)
Posted by little moon at 11:27 AM No comments:
ချစ်ကြင်သူ့ စက်ရာခင်း။ ။
သြော... မင်းလျှင်လေ ကိုယ့်ထံမှောက်က
Posted by little moon at 11:16 AM No comments:
Posted by little moon at 10:45 AM 8 comments:
Posted by little moon at 11:36 AM3comments:
နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြ European film festival ကို ရန်ကုန်မြို့လယ်က နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ Nov. 15 to 22 ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ် နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က တစ်နိုင်ငံကို နှစ်ကားနှုန်းနဲ့ ပြသမှာပါ။ တစ်နေ့ကို နှစ်ကားနဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကို နှစ်ကြိမ်ပြသပါတယ်။ လက်မှတ်တွေကိုတော့ အထက်ပါနိုင်ငံများရဲ့ သံရုံးများမှာ သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားတွေက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားပြောဖြစ်ပြီး English စာတမ်းထိုးပါတယ်။ တစ်ချို့ကားတွေဆို ဘာသာစကား နှစ်မျိုးသုံးမျိုးတောင်ပြောသေးတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ဇာတ်ကားတွေက -
"The Counterfeiters" and "Grave Decisions" from Germany
"The Son's Room" and "The Land" from Italy,
"Life in Pink" and "Could This be love" from France and
"Stardust and "Miss Potter" from Britain.
ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ ဘာကားပြမယ်ဆိုတာတော့ အသေးစိတ်မသိသေးပါဘူး။ မြို့ထဲရောက်ရင် နေပြည်တော်ရုံမှာ သွားကြည့်ရင်တော့ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
European Film festival တွေကို နှစ်တိုင်းလိုလို ကြည့်လာခဲ့တာ။ UFLမှာ ပြင်သစ်စာ ဒီပလိုမာသင်တန်းတက်နေတဲ့ ၁၉၉၉ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပဲ။ သမတရုံမှာလည်း ကြည့်ဖူးတယ်။ န၀ဒေးရုံမှာလည်း သွားကြည့်ဖူးတယ်။ ပြတဲ့ကားတွေက ဘယ်လိုမှ ပိုက်ဆံပေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် ကြည့်လို့မရနိုင်တဲ့ကားမျိုးတွေ။ ရုပ်ရှင်ရူး ကျွန်တော်မျိုးကြီးကတော့ ဒီလို ဇာတ်ကားမျိုးလေးတွေ ရန်ကုန်မှာ ကြည့်နိုင်အောင် ပြပေးတာကိုပဲ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by little moon at 1:42 PM2comments:
Posted by little moon at 10:38 AM6comments:
Posted by little moon at 11:02 AM5comments:
အခုတလောမှာ ဘလော့ကို လှည့်မကြည့်ဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ။ ပဲခူးနားက ရွာကို ဆွေမျိုးမိတ်သဂဟတွေရဲ့ ကထိန်ကိစ္စသွားနေတာရယ်။ ပြန်လာတော့လဲ ကွန်ပျူတာအသင်းတွေရဲ့ ဆယ်နှစ်ပြည့် Application Development ပြိုင်ပွဲတွေ၊ အစည်းအဝေး၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ ပြပွဲ .... ရှုပ်နေတာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ... အခုရက်ပိုင်းတွေမှာ အင်တာနက်ကြီးက ဘုရားစူးကို နှေးနေတာ browsing ကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချို့ရက်တွေမှာဆို GTalk ပဲသုံးလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ အရင် ကျော်ခွသုံးနေကြ US ကသူငယ်ချင်းအိမ်က ကိုယ့်ဂယ်ပေါက် proxy လေးက လည်းသုံးမရတော့ သူ့ဆီမှာတော့ proxy က run နေတယ်တဲ့။ ကိုယ်က ဒီကနေသုံးမရတော့ဘူး။
အခုမနက်လေးတင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ကိုမောင်လှရဲ့ ရုံးကို ရောက်လို့ အကိုရေ ဒီလိုဒီလိုလေး ၀င်ရင်ဖြင့် ဘလော့ရေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ အခုဝင်ရေးလို့ရတာ။
Posted by little moon at 12:21 PM 15 comments:
ဒီနှစ်ရက်သုံးရက်မှာ ကျွန်တော်စိတ်အ၀င်စားဆုံး သတင်းကတော့ မာရာဒိုနာကို အာဂျင်တီးနား ဘောလုံးအသင်းရဲ့ မန်နေဂျာ ခန့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ စိတ်ထဲမှာ အီလည်လည်နဲ့ တော်တော့်ကို ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေမိတယ်။
Good player ဖြစ်ခဲ့တိုင်း Good manager ဖြစ်မှာလား? ။ ကစားသမား ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး နည်းပြ မန်နေဂျာဘ၀ ရောက်တော့ လည်း ဆက်လက်အောင်မြင် ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် ဂျာမနီက ကလင်းစမန်း၊ ဟော်လန် နည်းပြကြီး ဘန်ဗက်စတန်၊ အခု Sunderland နည်းပြ မန်ယူအသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်းကင်း ... စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘောလုံး ကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မကစားခဲ့ပဲနဲ့လည်း လက်ရှိဘောလုံး လောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ထိပ်တန်း နည်းပြတွေရှိပေပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုကတော့ အကောင်းဆုံး နမူနာပေါ့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသင်းကို ပဲ့ကိုင်ဦးစီးမဲ့ မန်နေဂျာရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲမှာ ဘောလုံး ကောင်းကောင်း ကန်တတ်ထာထက် အများကြီးပိုတဲ့ အခြားအချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ပထမဆုံး ကစားသမားတွေရဲ့ ချစ်ခင်ရိုသေမှု၊ လေးစားလိုက်နာမှု ဆိုတာအဓိကပေါ့။ ဖာဂူဆင်ကြီး သူ့အသင်းကို သြဇာညောင်းပုံကို သာဓကအနေနဲ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ လေးစားရိုသေလောက်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ နမူနာကောင်းတွေ နေပုံထိုင်ပုံတွေလည်း လိုအပ်မယ်ထင်တယ်။
ပြီးတော့ ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ကို လေးစားမှုနဲ့ အသင်းမန်နေဂျာအပေါ်လေးစားမှု ဆိုတာမတူဘူး လေ။ မန်နေဂျာဆိုတာက ဦးနှောက်နဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာ ကိုယ့်ရှိတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ကြရတာ။ စိတ်ဖိအားလဲ အရမ်းများမယ်။
မာရာဒိုနာကို ကြည့်ကြရအောင် အာဂျင်တီးနားဘောလုံးအသင်းကို ဦးဆောင်ပြီး ၁၉၈၆မှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ အာဂျင်တီးနားပြည်သူတွေရဲ့ သူရဲကောင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ drug ပြဿနာတွေ၊ စည်းမရှိကမ်းမရှီ ဗရမ်းဗတာနေထိုင်မှုတွေ၊ သတင်းထောက်ကို လေသေနတ်နဲ့ ပစ်တာမျိုးတွေ ..... အင်္ဂလန် အသင်းဖက်ကို လက်နဲ့ ရိုက်ပြီး ဂိုးသွင်းခဲ့တာကိုတောင် ဘုရားပေးသောလက်ဆိုပြီး တလွဲ ဂုဏ်ယူနေသေးတယ်။
အာဂျင်တီးနားက သက်ဆိုင်ရာတွေကလည်း ဘာကို မျှော်လင့်လို့များ မာရာဒိုနာကို မန်နေဂျာခန့်လိုက်သည်မသိ။ မာရာဒိုနာမှာ ဦးနှောက်ကိုသုံးပြီး management role ကနေ ဆောင်ရွက်ဖူးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်း ဆိုတာမျိုးလည်း (ကျွန်တော်သိသလောက်) မရှိ။ တစ်ချိန်တုန်းက ရင်ထဲကသူရဲကောင်းနဲ့ လက်ရှိအသင်းကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ပေးနိုင်မဲ့ မန်နေဂျာကောင်းဆိုတာ လားလားမျှ မတူဖူးဆိုတာတော့ သိကြဖို့ ကောင်းမယ်။ သူ့အစား လူငယ်အသင်းနည်းပြ အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုရ Batista ကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေး လိုက်တာမှ ပိုကောင်းဦးမယ်ထင်တယ်။
ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တာကို မေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့် personal life ကိုတောင် ပြောင်မြောက်အောင် မထ်ိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ ဗရမ်းဗတာ ဆေးစွဲစိတ်ကျနေသူတစ်ယောက်က နိုင်ငံဘောလုံးအသင်းကို ဘယ်လို ဦးဆောင် ဦးရွက်လုပ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ ကြိုပြောလိုက်မယ် .... လုံးဝအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Posted by little moon at 11:38 AM4comments: